(၅)မိနစ်လောက်ရိုင်းတာကို ခုထိပြောလို့မဆုံးသေးဘူးလို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း – Cele Oscar
ယဉ်စစလေး နဲ့ မိန်းကလေး ဆန်လွန်း လှတဲ့ အသွင်အပြင် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အလှမယ် မျိုးကိုကိုစန်း ကတော့ သူမ ယုံကြည်ရာ လမ်းအတိုင်း ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ရှေ့ဆက် နေတဲ့ စိတ်ဓါတ် ခိုင်မာသူ လေးတစ်ဦးပါ။ Transgander တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း ကတော့ လက်ရှိမှာ သူအလိုချင် ဆုံးဘဝကို ရရှိသွား ခဲ့သလို သူအဖြစ်ချင်ဆုံး လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနေသူ တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်က Dancing With The Stars အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ ဖူးတဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း က သူ့ရဲ့ အပြုအမူ တစ်ခုကြောင့် ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ခံ ခဲ့ရပြီး ထိုဝေဖန်မှု က ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ခံနေရဆဲ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ဒီကိစ္စတွေ ကို အစပြန် မဖော်ချင်ပေမယ့် တစ်ခါတည်း ရှင်းအောင် ပြောလိုက်ပါဦးမယ်။ DWTS မှာ တွဲဖက် ပါတနာအပေါ်ကို မိုက်ရိုင်းလို့ ဆိုပြီး တော်တော်များများ ဝေဖန်ခဲ့ ကြဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီတုန်းက ဝေဖန်တာကိုလည်း ခံခဲ့သလို တွဲဖက်ပါတနာ အပေါ်ကိုလည်း အဲ့ကတည်း က လွန်သွားတာရှိရင် တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုပြီး တောင်းပန်ပြီးသား ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူ ပိုင်းမကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုး မဖြစ်အောင် နေခဲ့တယ် ဆင်ခြင်ခဲ့ ပါတယ်။ ”
“ကိုယ်မှား ခဲ့တဲ့ ကိစ္စမို့ ကျွန်မလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးလို့လည်း မငြင်းခဲ့ သလို အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး ထပ်မဖြစ်အောင်လည်း နေခဲ့ တယ်လေ။ ဒီလောက်ဆို တော်သင့်ပြီမဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ် မှားခဲ့တဲ့ အမှား မျိုး ထပ်မမှားအောင် နေတယ်လေ ဒါကိုမလုံလောက်ဘူးလား? Screen ပေါ်မှာ ၅ မိနစ်လောက် မိုက်ရိုင်း မိတာနဲ့ အပြင်မှာ အဲ့လို ယုတ်မ ယမိုက်ရိုင်းနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလောက် နဲ့ ပဲ တော်ကြပါတော့ Please” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ ရင်ဖွင့် လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးကိုကိုစန်း ကတော့ Dancing With The Stars အစီအစဉ် မှာ တွဲဖက်ပါတနာ Hi အပေါ်ကို ရည်ရွယ် ပြောဆိုတာ မျိုးမရှိပဲ ခဏတာစိတ် အခန့်အသင့် မဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ရိုင်းသလို အပြုအမူဖြစ်သွားခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဖတ်ရှု ပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Myo Ko Ko San’s fb
ယဉျစစလေး နဲ့ မိနျးကလေး ဆနျလှနျး လှတဲ့ အသှငျအပွငျ လေးကို ပိုငျဆိုငျ ထားသူတဈဦး ဖွဈတဲ့ အလှမယျ မြိုးကိုကိုစနျး ကတော့ သူမ ယုံကွညျရာ လမျးအတိုငျး ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ရှဆေ့ကျ နတေဲ့ စိတျဓါတျ ခိုငျမာသူ လေးတဈဦးပါ။ Transgander တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ မြိုးကိုကိုစနျး ကတော့ လကျရှိမှာ သူအလိုခငျြ ဆုံးဘဝကို ရရှိသှား ခဲ့သလို သူအဖွဈခငျြဆုံး လမျးကွောငျးပျေါ လြှောကျလှမျးနသေူ တဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှဈက Dancing With The Stars အစီအစဉျမှာ ပါဝငျခဲ့ ဖူးတဲ့ မြိုးကိုကိုစနျး က သူ့ရဲ့ အပွုအမူ တဈခုကွောငျ့ ပရိသတျ တှရေဲ့ ဝဖေနျမှုကို ပွငျးပွငျး ထနျထနျခံ ခဲ့ရပွီး ထိုဝဖေနျမှု က ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ခံနရေဆဲ ဖွဈတဲ့ အကွောငျးကို အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“ဒီကိစ်စတှေ ကို အစပွနျ မဖျောခငျြပမေယျ့ တဈခါတညျး ရှငျးအောငျ ပွောလိုကျပါဦးမယျ။ DWTS မှာ တှဲဖကျ ပါတနာအပျေါကို မိုကျရိုငျးလို့ ဆိုပွီး တျောတျောမြားမြား ဝဖေနျခဲ့ ကွဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီတုနျးက ဝဖေနျတာကိုလညျး ခံခဲ့သလို တှဲဖကျပါတနာ အပျေါကိုလညျး အဲ့ကတညျး က လှနျသှားတာရှိရငျ တောငျးပနျပါတယျ ဆိုပွီး တောငျးပနျပွီးသား ကိုယျ့ရဲ့ အပွုအမူ ပိုငျးမကောငျးဖွဈခဲ့တဲ့ အတှကျကွောငျ့ အဲ့ဒီနောကျပိုငျး အလားတူ ဖွဈရပျမြိုး မဖွဈအောငျ နခေဲ့တယျ ဆငျခွငျခဲ့ ပါတယျ။ ”
“ကိုယျမှား ခဲ့တဲ့ ကိစ်စမို့ ကြှနျမလုပျတာ မဟုတျပါဘူးလို့လညျး မငွငျးခဲ့ သလို အဲ့ဒီလိုပုံစံမြိုး ထပျမဖွဈအောငျလညျး နခေဲ့ တယျလေ။ ဒီလောကျဆို တျောသငျ့ပွီမဟုတျဘူးလား။ ကိုယျ မှားခဲ့တဲ့ အမှား မြိုး ထပျမမှားအောငျ နတေယျလေ ဒါကိုမလုံလောကျဘူးလား? Screen ပျေါမှာ ၅ မိနဈလောကျ မိုကျရိုငျး မိတာနဲ့ အပွငျမှာ အဲ့လို ယုတျမ ယမိုကျရိုငျးနတေဲ့သူမဟုတျပါဘူး။ ဒီလောကျ နဲ့ ပဲ တျောကွပါတော့ Please” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ စာမကျြနှာမှာ ရငျဖှငျ့ လာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။မြိုးကိုကိုစနျး ကတော့ Dancing With The Stars အစီအစဉျ မှာ တှဲဖကျပါတနာ Hi အပျေါကို ရညျရှယျ ပွောဆိုတာ မြိုးမရှိပဲ ခဏတာစိတျ အခနျ့အသငျ့ မဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ရိုငျးသလို အပွုအမူဖွဈသှားခဲ့တာ ပရိသတျကွီး အားလုံးသိပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ ဖတျရှု ပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျ ကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။
ဖခင်ဆီက မွေးနေ့လက်ဆောင် ရရှိခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင် ရဲ့ ခင်ပွန်း ကိုဇေသီဟ ရဲ့ (၅)ဧကကျယ်တဲ့ခြံကြီး ဗီဒီယို